Mazava ny dian'ny ICAO ny tolo-kevitr'i Qatar hifehy ny habakabany manokana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Qatar » Mazava ny dian'ny ICAO ny tolo-kevitr'i Qatar hifehy ny habakabany manokana
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • Vaovao farany momba ny Qatar • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Nanaiky i ICAO, raha ny tokony ho izy tamin'ny fananganana Faritra fampahalalana momba ny sidina momba ny sidina Doha (FIR) sy ny faritra fikarohana sy famonjena an'i Doha (SRR).
Qatar hametraka ny Faritra fampahalalam-baovao momba ny sidina ao amin'ny habakabany.
Qatar hiala amin'ny fifanarahana vita sonia tamin'i Bahrain, izay nanolorany ny serivisy fitaterana an'habakabaka.
Ny tolo-kevitra dia maneho ny iray amin'ireo zon'ny fiandrianam-pirenena Qatar.
Nanambara i Qatar androany fa ny an'ny UN Fikambanana Iraisam-pirenena ho an'ny sidina sivily (ICAO) nanome fankatoavana mialoha ny tolo-kevitry ny firenena hifehezana ny habakabany manokana, volana maro taorian'ny nanorenany ny laharana niaraka tamin'ireo mpifanolobodirindrina aminy amin'ny Helodrano.
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra Qatari dia nanome ny fanekeny 'amin'ny ankapobeny' ny Vondron'ny Firenena Mikambana hamela an'i Qatar hanangana ny Faritra Fampahalalana momba ny sidina (FIR) azy manokana eo amin'ny habakabany.
Ny fanapahan-kevitry ny ICAO dia valin'ny fangatahana avy any Qatar hiala amin'ny fifanarahana vita sonia tamin'ny fanjakan'ny fanjakan'ny Bahrain, Bahrain, izay nanolorany ny serivisy fitaterana an'habakabaka.
Ny fifanolanana nandritra ny telo taona niaraka tamin'ny vondron'ireo firenena mifanakaiky amin'ny Helodrano notarihin'i Arabia Saodita dia nanasongadina ny lesoka tamin'ny fifanarahana, izay nahatonga an'i Qatar hiankina tanteraka amin'ny fidirana amin'ny habakabaka fehezin'ny firenen-kafa.
Ny ICAO dia "nifanaraka, tamin'ny fotony… tamin'ny fananganana Faritra fampahalalana momba ny sidina sidina (FIR) sy ny faritra fikarohana sy famonjena an'i Doha (SRR)" tamin'ny fifampiresahana tamin'ny volana lasa teo, hoy ny minisiteran'ny fitaterana sy ny serasera ao Qatar.
Izy io dia “hampiditra ny habakabaka feno fiandrianan'i Qatar ary, hanatsarana ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny habakabaka isam-paritra, habakabaka mifanindry eny ambonin'ny ranomasina”, hoy ihany izy.
Ny tolo-kevitr'i Qatar koa dia nandrakotra ny “fikasany hiala amin'ny fandaminana ankehitriny izay nanolorany ny Bahrain ny fanomezana serivisy fitaterana an'habakabaka amin'ny faritry ny fiandrianany”.
"Ny tolo-kevitra dia maneho ny iray amin'ny zon'ny fanjakana Qatar ary mampiseho ny fampiasam-bola goavana nataon'i Qatar mba hampivelarana ny rafitry ny fitetezana ny rivotra," hoy ny minisitry ny fitaterana an'i Qatar Jassim Al-Sulaiti tao anatin'ilay fanambarana.
Fampahafantarana ireo mari-pankasitrahana mahery eto an-tany: mandroso ny toetrandro ...
Sidina vaovao any Uganda Airlines mankany Dubai ...
Naverina naverina tany Romania ny curfews sy ny masaka amin'ny ...
Royal Caribbean dia mitondra sambo vaovao ho an'i Jamaika ao ...
Tsy misy fikarakarana trano? Tsy misy serivisy? Ataovy tsara indray ny dia!
Fanangonana zava-kanton'ny illy vaovao nosoniavin'i Mona Hatoum natomboka ...